शनिवार पसल बन्द नहुने – Gulmiews
शनिवार पसल बन्द नहुने
२९ जेष्ठ २०७२, शुक्रबार ११:०४ Raju Gautam
गुल्मी जेठ २९÷ गुल्मीमा शनिवारबाट सुरु हुँनलागेको भारतिय सेनाबाट अबकास प्राप्त भु.पु. सैनीकहरुलाई बितरण गर्न लागीएको पेन्सन बितरण क्याम्प अबधी भर सदरमुकाम तम्घासका बजार शनिवार पनी बन्द नहुँने भएका छन् ।
जेठ ३० गतेबाट १५ दिन सम्म चल्ने पेन्सन बितरण क्याम्प अबधी भर पर्ने शनिवार पसल बन्द नहुँने गुल्मी उद्योग वाणीज्य गुल्मीका महासचिव कृष्णप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । वाणिज्य संघ गुल्मीले जिल्लामा प्रत्येक शनिवार तम्घास बजारका उद्योग व्यासाय, पसल बन्द गर्दै आएको छ । गुल्मीमा चल्ने पेन्सन बितरण क्याम्प र नेपालीहरुको महानपर्वमा भने शनिवार पनी सपल खोल्ने गर्दै आएको छ । जिल्लामा उत्पादन हुँने स्थानिय स्तरको कृषि जन्य उत्पादनलाई वढवा दिने उदेश्यले वाणिज्य संघ गुल्मीको संयोजनमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले तम्घास हाट बजार समेत संञ्चालन गर्दै आएको छ । शनिवार तम्घास बजार बन्द गरी हाट बजारलाई मदत गर्ने वाणिज्य संघको उदेश्य रहेको महासचिव पोखरेलले बताउनु भयो ।
भारतिय सेना बाट अबकास प्राप्त भु.पु.सैनीकहरुका लागी बितरण गरिने पेन्सन क्याम्प गुल्ल्मीमा शनिवार बाट सुरु हुने भएको छ । प्रत्येक वर्षको ६÷६ महिनामा बितरण गरिदै आएको पेन्सन बितरण कार्याक्रम यहि जेष्ठ ३० गते बाट १५ दिन सम्म सरमुकाम तम्घासमा संञ्चालन हँुने जिल्ला सैनिक वोर्ण गुल्मीका सेक्रेटरी सन्त बहादुर खड्काले बताउनु भयो । सदरमुकाम तम्घासमा १५ दिन सम्म संञ्चालन हुने पेन्सन वितरण क्याम्पबाट गुल्मी जिल्ला लगायत बाग्लुङ्ग, अर्घाखाँची ,प्युठान लगायतका ठाउँका भु.पु. भारतिय सैनिकहरु करिव ७ हजार ५ सयले पेन्सन क्याम्पमा बुभ्mने खड्काले बताउनु भयो । गत बैसाख ३० गते बाट सुरु हुँने भनिएकोमा बिनासकारी भुकम्पका कारण एक महिना पछि सारिएको थियो ।